Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo ku Dhawaaqday “Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha” “Skills Transfer Program (STP)” | Marsa News
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo ku Dhawaaqday “Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha” “Skills Transfer Program (STP)”
August 7, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Sida aynu la wada socono Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu waxa ay u taagan tahay qoridda, horumarinta, tayaynta iyo maamulidda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Somaliland. Iyada oo laga shidaal qaadanayo awoodda dastuur ee hay’adda iyo kor u qaadidda aqoonta iyo tayada shaqaalaha ayaa hay’addu waxa ay muddaba wadday wada tashiyo ku saabsan sidii looga faa’iidaysan lahaa dadka aqoonta iyo xirfadaha leh ee reer Somaliland ee ka imanaya debedaha isla markaana muddo gaaban joogaya dalka. Dadkaasi waxa ay inta badan jecel yihiin in ay dalkooda hooyo uga faa’iideeyaan wakhtiga ay joogaan nasiibdarrose ma helaan tilmaan iyo ciddii isu xilqaami lahayd inay uga faa’iideeyaan dalka, taasina waxay keentaa in ay sidaa ku noqdaan iyada oo aan laga faa’idaysan.
Sidaas darteed, laga bilaabo 3 August 2017 waxa ay Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu si rasmi ah ugu dhawaaqaysaa barnaamij lagu magacaabo “Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha” ama “Skills Transfer Program” kaas oo looga faa’iidaysan doono aqoonta iyo xirfadda dadka reer Somaliland ee dalka booqasho gaaban ku imanaya.
Barnaamijkan ayaa Hay’adda Shaqaaluhu iyada oo kaashanaysa Mac-hadka Tababarka Shaqaalaha Dawladda waxa diyaarin doontaa tababarro gaagaaban iyo qaar xirfadeed oo dadkaasi ay u qaban doonaan shaqaalaha dawladda ee kala duwan iyada oo loo eegayo nooca baahida iyo aqoonta qofka. Intaas ka dib Mac-hadku waxa uu bixin doonaa shahaadooyin uu guddoonsiinayo shaqaalaha dhammaysta tababarradaas sidoo kelena Hay’adda shaqaaluhu waxa u saari doontaa guddi dabagal ku samaysa sida looga faa’iidaystay aqoontii iyo sida looga hirgeliyay goobihii shaqada. Barnaamijkani waxa kele oo uu samayn doonaa Database ama Xog-kaydiyo lagu ururin doonto dadka aqoonta iyo xirfadda leh ee debedda ku nool taas oo iyaduna noqon doonta xog qaranku uu ka faa’idaysan karo.
Haddaba iyada oo hawshu ay bilow tahay, Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu waxa ay wejiga hore ee barnaamijkan ay ka hir gelinaysaa dalka Sweden, halkaas oo xubno ka mid ah dadka reer Somaliland ee dalkaas ku nooli ay si rasmi ah hay’adda ugala shaqayn doonaan. Intaas ka dib waxa uu barnaamijku ugu fidi doonaa dalalka kale ee adduunka.
Barnaamijkani maaha mid lacag lagu bixinayo ama lacagi ay hay’adda ama shaqaalahaba ka soo gelayso. Dhammaan tababarrada iyo shaqada la qabanayaa waa mid tabarruc ah oo aqoon yahannadu ay wakhtigooda u hureen in ay dalka uga faa’ideeyaan aqoontooda shaqaalahana laga filayo inay iyaguna aqoontaa ka faa’iidaystaan si shaqadoodu intii hore uga sii wanaagsanaato.
Hay’adda shaqaalaha dawladdu waxa ay si gaar ah ugu mahadnaqaysaa Maxamed Ismaaciil Ibraahim iyo Muuse Maxamuud Ciise (Dalmar) oo barnaamijkan kala shaqeeyay ahna xubnaha sida rasmiga ah ugala shaqayn doona hay’adda dhanka debedaha. Iyada oo fadhigoodu yahay magaaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu waxa ay u heellan tahay in ay gudato waajibaadkeeda qaran ee dastuurku uu ku waajibiyay waxaanay ballan qaadaysaa in ay garaaci doonto albaab kasta oo fursad u siinaya horumarinta iyo kor u qaadista tayada iyo aqoonta shaqaalaha dawladda si aynu u helno dawlad la jaan qaadi karta dalalka horumaray ee caalamka koowaad.
Haddii aad hayso su’aal, fikir, soo jeedin ama la wadaagis ku saabsan barnaamijkan waxa aad la soo xidhiidhi kartaan emailkan: somalilandstp@gmail.com
Ilaahay baa mahad leh
Sharmarke Axmed Muxumed Geelle
Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Somaliland.